Epidemics: kutyisidzira kusingaoneki - Gwaro (2020) - Afrikhepri Fondation
En China, kutanga kwehosha yepneumonia yakabatana neakona inoisa nyaya yedenda uye njodzi yavanomirira padanho repasi rose pahurongwa. Kuongorora kwakasimba kwa2014 kutiyeuchidza nezvedanho rekutyisidzira uku. Mumakore makumi matanhatu, zvinopfuura mazana matatu nemakumi mashanu zvirwere zvitsva zvinoratidzika: SARS, H1N1, H5N1, Ebola. Iko kubuda kwehutachiona hunoita sekunowanda. Nokubatana, nyanzvi dzinoshamisika: denda idzva repasi rose richaitika rini? Denda, Spanish flu, mbichana, AIDS. Nhoroondo inoyamburwa nezvirwere zvinotapukira izvo zvakaodza vanhu. Asi, kupi iko kutsvagurudzo nhasi? Isu takagadzirira here?
Iyi firimu inotevera mutsoka dzehutachiona hutatu hunonyanya kutyisidzira: hutachiona hweH7N9 muAsia, Mers-CoV, hama yaSARS, inoshanda mu Middle East, uye hutachiona hweEbola, hunomutsa zvinotyisa zvakanyanya mu Africa. Zviri kupi. Semuenzaniso, Ebola fever yakafambiswa nemabhuru emichero, uye yekuEmpia furuwenza H5N1 inotakurwa neshiri dzinofamba. Takatarisana nekutyisidzira, nyika yesainzi iri kusangana.
Epidemics: njodzi chaidzo uye maalarm enhema
1 nyowani kubva ku € 8,99
Tenga 8,99 €
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Gumiguru 19, 2020 7:10 PM